I-Airbus ifumana ikhontrakthi yokuqala yeeNkonzo zeYure yokuhamba ngenqwelo moya kwiJetBlue Airways
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-Airbus ifumana ikhontrakthi yokuqala yeeNkonzo zeYure yokuhamba ngenqwelo moya kwiJetBlue Airways
Ikhontrakthi yenkonzo yolondolozo lweyure ibandakanya iinkonzo ezibonakalayo kunye nolawulo lwesitokhwe esiza kwindawo, kunye nokufikelela kwichibi lezahlulo zeAirbus, ubunjineli kunye neenkonzo zokulungisa.
I-JetBlue ifumana ixesha elide iinkonzo zokugcina izinto ze-Airbus kwiinqwelomoya zayo ezingama-70 A220 ngokulandelelana
I-A220 yaqala ukusebenza ngeJetBlue ngo-Epreli 2021
Abathengi abangama-A220 baxhamla kwinkqubo yolondolozo lwe-Airbus 'ye-FHS
I-Airbus ityikitye isivumelwano sayo sokuqala seNkonzo yeeYure zokuhamba ngenqwelo moya (FHS) kunye nomthengi waseMntla Melika. I-airline esekwe e-US iJetBlue ifumana iinkonzo zexesha elide ze-Airbus zolondolozo lwenqwelomoya yayo eyi-70 A220 ngokulandelelana. I-A220 iqale ukusebenza nge JetBlue ngoAprili 2021.
Ikhontrakthi yenkonzo yeyolondolozo-yeyure ibandakanya iinkonzo ezibonakalayo kunye nolawulo lwezitokhwe kwindawo ekuyo, kunye nokufikelela kuyo Airbus'ichibi leenxalenye, iinkonzo zobunjineli kunye nokulungisa.
“Zonke iinkqubo zeenqwelo moya zeAirbus, abathengi abangama - A220 baxhamla kwinkqubo yolondolozo lwe-FHS eyaziwayo. Siyazingca ngokwamkela iJetBlue njengomthengi wethu wokuqala we-FHS eMntla Melika kwaye sikwazi ukwandisa ukubakho kweenqwelo ze-A220 ukuxhasa ukuphinda kuqalise ukugcwala kwezithuthi ”, utshilo uDominik Wacht, iNtloko yeeNkonzo zaBathengi zeAirbus, eMntla Melika.
"Ngeendleko zokuhlawula ngokuthe ngqo ezithe kratya kwezinye iinqwelomoya kwiinqwelomoya zethu kuzo zombini ukonga ipetroli kunye nokungasetyenziswa kweoyile, i-A220 ikwanceda ukuqhubekeka nokuseta iindleko zeJetBlue kulonyaka," utshilo uBill Cade, uSekela Mongameli wezoBuchwephesha, uJetBlue. "Isisombululo se-Airbus 'FHS sinceda ukuxhasa iinjongo zethu zexesha elide zezemali njengoko zinxulumene nolondolozo kwaye zixhasa ukubanakho kwethu ukubonelela ngexabiso eliphantsi kunye nenkonzo yokuphumelela amabhaso kubathengi abaninzi beJetBlue."
IJetBlue iya kuba ngumqhubi wenqwelomoya wesithathu weA220 ukusebenzisa inkonzo yeAirbus 'FHS. Zingaphezulu kwe-150 ii-A220s ezisiwe kwiinqwelomoya ezisebenza ngeendlela ezi-XNUMX eAsia, eMelika, eYurophu nase-Afrika, oku kungqina ukuba ilungu losapho lakwa-Airbus liyasebenza kakhulu.
Le khontrakthi yokuqala ye-FHS ye-Airbus eMntla Melika iqinisekisa ukwanda okwandayo kwesisombululo se-Airbus sokugcina iyure ukuhamba nokuqala ngokutsha kwezithuthi: kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo, izivumelwano ezilishumi elinanye ze-FHS zisayiniwe kunye nabaqhubi kwihlabathi liphela.
I-Kazakhstan isungula i-app entsha ye-COVID yokuhamba ngaphakathi kwe-Eurasian Economic Union